Mourinho oo kala taliyay tababare Solskjær sida ugu fiican ee loo soo saari karo awooda ciyaareed ee Rashford – Gool FM
(Manchester) 23 Sebt 2019.Tababarihii hore kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa kula taliyay macalinka haatan leyliya Red Devils ee reer Norwegian Ole Gunnar Solskjær, sida ugu wanaagsan ee loo soo saari karo awooda ciyaareed weeraryahanka reer England ee Marcus Rashford.
Marcus Rashford ayaa ku soo ifa baxay ka hoos shaqeynta Jose Mourinho xilligii uu macalinka ka ahaa kooxda Manchester United, laakiin waxaa shaqada laga ceyriyay bartamihii xilli ciyaareedkii hore, waxaana lagu badalay Solskjær.
Kooxda West Ham ayaa shalay guuldaro niyad-jab ah ku baday Manchester United garoonkeeda London Stadium, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League.
Haddaba Jose Mourinho ayaa sheegay kaddib guuldaradii Manchester United ay kala kulantay kooxda West Ham:
“Ciyaartii ugu muhiimsaneyd ee nolosheyda kooxda Man United waa finalkii Europa League, waxaan ku tiirsanaa Marcus Rashford booska 9-aad, wuxuu noqon karaa mid halis ku ah dhanka weerarka”.
“Marcus Rashford wuxuu ku fiicnaan lahaa inuu tago dhanka bidix sida Sadio Mane uu ka sameeyo kooxda Liverpool”, ayuu hadalkiisa ku soo xiray Jose Mourinho.
Si kastaba ha noqotee, Manchester United ayaa si xoogan u dhibtooneysa kaddib Lix kulan ilaa iyo haatan laga soo ciyaaray horyaalka Premier League, waxayna 8 dhibcood la fadhisaa booska 8-aad.